कल्पना दाहालले भनिन्- अब म पनि बि'हे गर्छु । रमेश प्रसाईको हुनेवाला श्रीम'तीसँग फोनमा यस्तो कुरा भयो - Public 24Khabar
Home News कल्पना दाहालले भनिन्- अब म पनि बि’हे गर्छु । रमेश प्रसाईको हुनेवाला...
कल्पना दाहालले भनिन्- अब म पनि बि’हे गर्छु । रमेश प्रसाईको हुनेवाला श्रीम’तीसँग फोनमा यस्तो कुरा भयो
राजनीतिक प्रतिनिधित्व र पहुँचले धेरै कुराको समाधान निकाल्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर, यो बाटोमा हिँड्दा पनि निकास निस्कएन किनकि प्रतिनिधित्वको कुरालाई आलंकारिक बनाइयो । राजनीतिक नेतृत्व नै पितृसत्तात्मक सोचले चल्दा यसको निकास निस्कन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ । जस्तो, स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरमध्ये एक पद महिलालाई दिने कानून त बन्यो, तर अपवाद छाड्ने हो भने सबै महिलालाई एउटै डालोमा हालेर उपमेयर वा उपाध्यक्ष पदमा सीमित गरियो । यद्यपि, यो कानून आफैंमा सकारात्मक छ ।
जस्तो महिलालाई उपमेयरका रुपमा देख्दा कम्तिमा आममानिसमा महिलाहरु पनि शक्तिशाली रहेछन् भन्ने मान्यता स्थापित हुने भयो । समाजका अन्य निकाय जस्तो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति होस् वा विभिन्न संघसंस्थामा पनि महिलालाई उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमै सीमित गर्ने, अध्यक्ष उठ्न खोज्दा नपत्याउने परिपाटी ज्युँदो छ । यस्ता कुराको समाधानका लागि राजनीतिक र सामाजिक इमान्दारिताको खाँचो छ । जस्तो, गएको संघीय चुनावमा महिलालाई हार्ने ठाउँमा उठाइयो, जित्ने ठाउँमा पुरुषहरु उठे । राजनीतिक नियत र प्रतिवद्धतामा खोट भएसम्म यस्तो अवस्था उल्टनेवाला छैन । हामीले हेर्न बाँकी पनि छ, आज उपमेयर वा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका महिलाहरुलाई आगामी चुनावमा राजनीतिक दलले मेयर वा अध्यक्षमा उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् ?
Previous articleआक्र”मण सैलीमा देशभर एकै पटक राजाबादीको आ’न्दोलन ! काठमाडौँमा उर्लियो जनसागर, मुर्दाबादको लाग्यो नारा
Next articleनेपालको तेलमा यसरी लोभिए विदेशी, जर्मन लगायतका देशमा नेपालमा उत्पादित सुगन्धित तेल,माग धान्न मुश्कि*ल (सेयर गराै)